AppLock အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.7.0in for Android
ဒေါင်းလုပ် APK（21.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
★ # 1 နိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်အတွင်းအက်ပလီကေးရှင်းသော့ခတ်သည်ဘာသာစကား 45 မျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။ ★★★
သင်၏ privacy ကို password, performance password, fingergrint slection ကိုကာကွယ်ပါ။ calculator သော့ခတ်သို့မဟုတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်အဖြစ် Applock icon ကို contlock icon ကိုဖုံးကွယ်။
abovagram, facebook, whatsapp, telegtm, paytm, ပြခန်း, ပြခန်း, ပြခန်း, ပြခန်း, ပြခန်း, ဒါကြောင့်သင့်ဖုန်းထဲမှာကိုယ်ပိုင်ဒေတာကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူး။ သင်၏အချက်အလက်များကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးလုံခြုံမှုကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
above applloch သည်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖုံးကွယ်နိုင်သည်။ ဓါတ်ပုံ Vault သည် applock တွင်အားကောင်းသောဓာတ်ပုံသော့ခတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများပမာဏတွင်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ Cloud သို့ထပ်တူထပ်မျှလည်းအခမဲ့ဖြစ်သည်။
applock သည် private browser ရှိသည်။ သင်၏ browser သမိုင်းကိုသိမ်းဆည်းမည်မဟုတ်ပါ။ အစာရှောင်ခြင်းရှာဖွေပြီးသဲလွန်စကိုချန်ထားပါ။
☞applockသည်ကျပန်းကီးဘုတ်နှင့်မမြင်ရသောပုံစံသော့ခတ်ရှိသည်။ လူတွေကို Peep password or ပုံစံကို Peep လုပ်နိုင်တာနောက်မရှိတော့ဘူး။ ပိုပြီးလုံခြုံ!
★ Applock နှင့်အတူ -
သင် Snapchat, Instagram ကိုစစ်ဆေးပါ။
မိဘများသည်သင်၏ Snapchat, Instagram ကိုစစ်ဆေးပြီးဒင်္ဂါးများကိုသုံးပါ။ သူငယ်ချင်းများအကြောင်းမိုဘိုင်းဒေတာနှင့်ဂိမ်းကစားရန်သင်၏ဖုန်းကိုငှားရမ်းပါ။
သင်၏အက်ပ်များထဲမှတစ် ဦး တစ်ယောက်ယောက်ကိုတစ် ဦး တစ်ယောက်ကလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုထပ်မံဖတ်ရန်မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ ကလေးတွေအကြောင်း settings တွေကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်, မှားယွင်းတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုပြန်ပို့ပါ။
--- FAQ - -Fr >> Open Appllock> Open Appllock, Promport, Protect, Office, Promollock settings
2) Hidden Applock ကိုဖွင့်နည်း။
ကျေးဇူးပြု. နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး Hidden Applock ကိုဖွင့်ရန်အောက်ပါနည်းလမ်းလေးခုကိုကြိုးစားပါ။
1 ။ ပြခန်းကိုဖွင့်ပြီးပြခန်းကိုဖွင့်ပါ, ပုံတစ်ပုံကိုရွေးပါ, Share ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ "Open Applock" ကိုရှာပြီး၎င်းကိုနှိပ်ပါ။
2 ။ Widgets
ရှည်လျားသောပင်မမျက်နှာပြင်ကိုနှိပ်ပါ, ဝစ်ဂျက်များကိုနှိပ်ပါ။ "Open Applock" ကိုရှာပါ။ ၎င်းကိုမူလမြင်ကွင်းသို့ဆွဲယူပါ။
3 ။ Pad Bord
သင်၏ Dial Pad တွင် * # * # 12345 # * # * ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
4 ။ Browser
3) uninstalling applock ကိုရပ်တန့်ရန် Applock of Applock ၏, ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှ Applock ကိုစကားဝှက်မပါဘဲ unnstall သို့မဟုတ်သတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်မလိုချင်တဲ့အချိန်မှာအဆင့်မြင့်အကာအကွယ်ကိုသင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံပါ။ ပြီးရင် Applock Icon ကိုအသာပုတ်ပါ, Lock Page ၏ညာဘက်ထိပ်ထောင့်ရှိအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ, 'လျှို့ဝှက်နံပါတ်' ကိုနှိပ်ပါ။ 1 ။ လုံခြုံရေးအဖြေ - လုံခြုံရေးအဖြေကိုရိုက်ထည့်ပါ 'Reset Password' ကိုနှိပ်ပါ။
2 ။ လုံခြုံရေးအီးမေးလ်ကိုနှိပ်ပါ။ Reset Reset Code ကိုနှိပ်ပါ။
- - အင်္ဂါရပ်များ - -r >> အက်ပ်များနှင့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုစကားဝှက်, ပုံစံ, Fingerprint Lock
• Vault: ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဝှက်ရန်, Cloud သို့ Sync
•ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောအကြောင်းအရာများ - calculator သို့မဟုတ် chilvery icon: browser သမိုင်းမှတ်တမ်းများမရှိပါ။ ကျူးကျော်သူ Selfie: Invaders ၏ဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးပါ။ LOCK: Auto-Lock / unlock
အဆင့်မြင့်အကာအကွယ်ပေးမှု - Advanced Protection: Task Killer Block
•ကျပန်းကီးဘုတ် - လူတွေကို peping pin code ကိုတားဆီး applicate / disable aclock လုပ်ပါ။ • Quick Lock switch: lock / unlock
Notification Bar in Lock / unlock
system settings ကိုပိတ်ထားပါ။ •လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုခွင့်ပြုပါ။ Set အချိန်အတွင်းနောက်တဖန် TIPRING BRIDSISS • PERSTER Saving Mode ကိုအသုံးပြုပါ။
applloch endo အုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကို အသုံးပြု. Applock enable လုပ်ပါ "။ Applockers ကို uninstall လုပ်သူတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်သာအသုံးပြုသည်။
Applock သည် Accessibility0န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။
Power Saving Mode ကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုချက်0န်ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုပါ။0န်ဆောင်မှုကိုမသန်စွမ်းသူများကိုအက်ပလီကေးရှင်းများကိုသော့ဖွင့်ရန်နှင့်ဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်အသုံးပြုသူများကိုသာစစ်ဆေးရန်သာအသုံးပြုသည်။
Application သည်သင်၏ private data ကိုရယူရန်ဤခွင့်ပြုချက်များကိုဘယ်တော့မှအသုံးမပြုပါ။
အခမဲ့ခံစားရသည် သင်၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ပါ။ [email protected]
ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.ddomobile.com
ဘာအသစ်လဲ AppLock 3.7.0in